Wasakhda carrada: sababaha iyo cawaaqibta | Cusbooneysiinta Cagaaran
Tomàs Bigordà | | Beeraha deegaanka, Ecology
La wasakhda carrada ama wax ka beddelka tayada dhulka waxaa sabab u ah sababo kala duwan cawaaqib xumadiisuna waxay badanaa keentaa dhibaatooyin culus oo saameeya dhirta, xoolaha iyo caafimaadka dadka muddo dheer.
Iyada oo loo marayo beeraha waa mid ka mid ah hababka nidaamka deegaanku isu dheellitir la'aanta, wasakhaynta biyaha la cabbo ama biyaha waraabka, taas oo macnaheedu yahay in dhibaatadan aan had iyo jeer la xallin karin mararka qaarkoodna qayb ka mid ah waxyeelada laga soo kaban karo. Laakiin,maxaa sababa inay gacan ka geystaan ​​wasakheynta carrada sideese lagu xallin karaa?
1 Waxyaabaha sababa wasakhda carrada
1.1 Qashin qubka Spain
1.2 Ercros wuxuu ku daatay Flix
1.3 Liis dheer
2 Noocyada qashinka
3 Cawaaqibta wasakhda carrada
3.1 Chernobyl 30 sano kadib
4 Xalka wasakhda carrada
4.1 Hayso shabakad gaadiid dadweyne oo wanaagsan
4.2 Adeegsiga gawaarida korontada ku shaqeysa
4.3 Ka fogow in gaarigaagu uu muddo dheer socdo marka aad istaagayso
4.4 Gaarigaaga ku hay xaalad wanaagsan
4.5 Ka caawi ka hortagga xaalufinta dhirta
4.6 Ka dooro waxyaabo badan oo ah alaabada dabiiciga ah.
4.7 Bacaha caaga ah
4.8 Kala soocida qashinka
Waxyaabaha sababa wasakhda carrada
Sababaha wasakheynta carrada way kala duwan yihiin, tusaale ayaa ah walxaha sunta leh ee dhulka hoostiisa ku dambeeya ee ku dambeeya wasakheynta biyaha dhulka hoostiisa taas oo markaa loo isticmaali doono in lagu waraabiyo, lagu cabbo ama aakhirka lagu sumeeyo silsiladda cuntada. Nidaam lagu maareeyo si aan ku talogal ahayn u nijaaseyno nafteenna iyo wax kasta oo hareerahayaga ah, iyo dhibaatada ugu weyni waxay tahay in ay qaadan doonto waxoogaa jiilal ah si loo xalliyo waxa aan ku kallifnay isku daygan si aan u soo saarno si ballaaran iyada oo aan laga fekerin kuwa dambe ee dambe. anaga
La xiriirka aagga wasakhaysan markasta toos uma aha. Waa waxa dhaca markii la aasayo walxaha sunta ah dhulka hoostiisa kuwanna waxay ku dambeeyaan wasakheynta biyaha dhulka hoostiisa ee markaa loo isticmaalo waraabinta, cabitaanka ama aakhirka in lagu sumeeyo silsiladda cuntada, adoo cunaya kalluunka, digaagga ama xayawaan kasta oo sumaysan.
Kaydinta khaldan ee qashinka, si ula kac ah ama qashin qub (sida shirkadda Ercros ee Flix), uruurinta qashinka dushiisa ama aasid isku mid ah (qashin badan oo Spain ku yaal), iyo sidoo kale daadashada haamaha ama dhigaalka burburka awgood, kaabayaasha dhaqaalaha oo liita ayaa ka mid ah sababaha ugu waaweyn.
Iyo, kaliya ma joogno halkan tan iyo liistada waxaa lagu balaariyay dhibaatooyinka "yar" sida faafitaanka shucaaca, Isticmaalka degdegga ah ee sunta cayayaanka, macdanta, warshadaha kiimikada ama isla qalabka dhismaha ee maanta la isticmaalo iyadoon la ogeyn saameynta ay leeyihiin.
Qashin qubka Spain
Feejignaanta yar ee Spain siiso dib-u-warshadaynta iyo daryeelka deegaanka ayaa maanta ah ceeb ceeb ka hor Midowga Yurub, laakiin waxay ku hanjabaysaa inay noqonayso isha laga helo ganaaxyada millionaire sanadaha soo socda. Brussels waxay leedahay qorshayaal dib-u-warshadeyn aad u hami leh: sanadka 2020, dhammaan waddammada xubnaha ka ah waa inay dib-u-warshadeeyaan 50% qashinkooda, Komishankuna wuxuu oggolaanayaa inuu gaaro 70% sannadka 2030. Si kastaba ha noqotee, Spain si dhib yar maanta dib looma warshadeeyo. 33% qashinkaaga horumarkuna waa yaryahay. Xitaa rajada inteeda badani ma rajeynayso in waddankeennu uu ku guto waajibaadkiisa saddex sano gudahood.
Wicitaankii ugu horreeyay ee soo-jeedinta wuxuu horeyba ugu yimid qaab laba xukun oo ka yimid Maxkamadda Caddaaladda ee Midowga Yurub (CJEU), oo ku cambaareysa Spain jiritaanka iyo ka tagista buuxda ee 88 qashin-qub aan xakamayn. Midka ugu horreeya waxaa la soo saaray Febraayo 2016 waxaana lagu aqoonsaday 27 qashin-qubka oo wali shaqeeya ama aan la xidhin ka dib markii la xidhay. Midka labaad wuxuu yimid maalmo un kahor wuxuuna farahiisa galiyay 61 qashin oo kale, 80% waa laqaybiyey inta u dhexeysa Jasiiradaha Canary iyo Castilla y León.
Sida laga soo xigtay khubaro kala duwan, qashin qubka ayaa ah bambooyin waqti-gaab ah. Markii la xidho, waa in deegaanka laga kontaroolo ee sanadaha 30, la socodka biyaha dhulka hoostiisa ku jira iyo qiiqa wasakheysan, maxaa yeelay geedi socodka burburka laguma joojiyo daboolida daloolka.
Meelo badan oo sharci ah ayaa lagu daboolay lakab saddex-milimitir ah oo polyetylen ah, oo leh xayndaab dhoobo ah xaaladaha ugu fiican, laakiin waxaa badanaa lagu dalooliyaa gaas iyo dhaqdhaqaaqyada dhulka. «Waxay halis u yihiin caafimaadka bulshada. Maamulada ayaa ka gabanaya xaqiiqda ah in qaar badan oo ka mid ah ay ku jiraan kaliya qashinka aan firfircooneyn, laakiin aad uga taxaddaraan kuwa duminaya iyo qalabka dhismaha, sida asbestos ama tuubooyinka leedhka, ee la muujiyay waa kansar»
Ercros wuxuu ku daatay Flix
Kaydka Flix, oo ka tirsan gobolka Catalan ee Tarragona, ayaa markhaati ka ahaa in ka badan qarni daadinta iyo wasakhda carrada ee walxaha kiimikada ee shirkadda Ercros. Tani waxay horseedday faddarayn guud ahaan webiga Ebro, bartaas ilaa afka.
Wasakhda waxaa ka mid ah bir culus sida meerkurida iyo cadmium, ama sunta iyo iskudhafka organochlorine sida hexachlorobenzene, polychlorinated biphenyls (PCBs) ama DDT iyo dheef-shiid kiimikaadkooda.
“Ercros, waxaa loo tixgeliyaa inuu yahay kiimikada ugu wasakheynta badan webiga Ebro, wuxuu halgan ugu jiray sanado inuu iska ilaaliyo inuu bixiyo kharashka nadiifinta wabiga, taasoo iyaduna ah isha ugu muhiimsan ee laga cabo biyaha. Warshadda Ercros waxay ku taal meel u dhow magaalada Flix, taas oo magaceeda u bixisa kaydka ay saameysay wasakhda Ercros SA, oo hore u ahayd Erkimia, halkaasoo ay ku soo saarto kuna iibiso. waxyaabaha aasaasiga ah ee warshadaha kiimikada iyo dawooyinka.
Nasiib darrose, liistada ayaa aad uga dheer, ku dhowaad aan la koobi karayn. Waxaan soo qaadan karnaa sababo kale oo muhiim ah oo isku mid ah, sida macdanta (qalabka sida meerkurida, cadmium, naxaasta, arsenic, leedhka), warshadaha kiimikada, Dillaaca shucaaca, isticmaalka culus ee sunta cayayaanka, wasakheynta matoorada gubida, qiiqa ka imanaya warshadaha, qalabka dhismaha, gubida shidaalka (dhuxusha, saliida iyo gaaska)), bullaacadaha duugoobay ee xaaladoodu liidato iyo kuwa kale.
Waxaan arki karnaa inay jiraan ilo fara badan oo wasakhda carrada, sababaha keena marar badan way adagtahay in la helo, maadaama wasakhdu ay gaari karto dhir ama xayawaan ama, siyaabo badan oo kaladuwan u wasakhayso biyaha, laakiin had iyo jeer maahan way yar yihiin.
Xaqiiqda adag waxaa jira sababo badan, taas oo si guud marka loo eego sababa xasilooni darrada isku dayga in la ogaado waxa ay yihiin, maadaama ay tahay hawl adag. Waxay u egtahay in gurigeena ay ku yaalliin 20 daad oo aanan arki karin halka ay ku yaalliin iyo sida loo baabi'in karo ama loo dayactiri karo. Dhibaatada halkan ka jirtaa maahan gurigeennii, ee waa meeraheenna gaarka ah ee halista ku jira
Mid ka mid ah dhibaatooyinka waaweyn waxaa jira sababo badan, taas oo guud ahaan marka la eego sababa xasilooni-darrada ka jirta isku dayga ah in la ogaado waxa ay yihiin, maadaama ay tahay hawl adag. Waxay u egtahay in gurigeena ay ku yaalliin 20 daad oo aanan arki karin halka ay ku yaalliin iyo sida loo ciribtirayo ama loo dayactirayo. Dhibaatada halkan ka jirtaa maahan gurigeennii, ee waa meeraheenna oo qatar ku jira.
Alaabada halista ah: Alaabada lagu nadiifiyo, rinjiga, daawooyinka iyo baytariyada waa sun aad u sun ah. Alaabooyinkani waxay u baahan yihiin olole gaar ah oo uruurin ah oo aan ku dambayn qashin-qubka aan la xakamaynin halkaas oo ay ku sababi karaan masiibooyin xagga deegaanka ah iyagoo wasakhaynaya biyaha iyo ciidda
Xirmooyinka ayaa ka mid ah waxyaabaha sunta ah ee ugu halista badan maadada meerkuri iyo cadmium. Marka baytariyada ka dhammaadaan oo lagu ururiyo meelaha qashinka lagu shubo ama la gubo, meerkuriga waa la oggol yahay inuu baxsado, isla markaana goor dhow ama goor dambe ayuu biyaha galayaa. Meerkuriga waxaa ku dhex jira looxaan iyo algae, laga bilaabo kuwan ilaa kalluunka iyo kuwan ilaa dadka. Unugga badhanka ayaa sumeyn kara 600.000 litir. biyo ah. Daawooyinku waxay leeyihiin qaybo sun ah oo waliba ku dhex daadan kara qashin qubka waxayna geli karaan biyaha, iyagoo wasakheyn kara.
Gurigaqashinka guryaha iyo / ama bulshada.
Warshadaha: asalkeedu waa sheyga waxsoosaarka wax soo saarka ama isbedelka alaabta ceyriinka ah.
Soo dhawayn: qashinka guud ahaan lagu tilmaamo inay yihiin qashinka halista ah isla markaana noqon kara mid dabiici ah oo aan dabiici ahayn.
Ganacsi: laga bilaabo carwooyinka, xafiisyada, dukaamada, iwm, oo halabuurkoodu yahay dabiici, sida hadhaaga miraha, khudaarta, kartoonada, waraaqaha, iwm.
Qashinka magaalooyinka: oo u dhiganta dadweynaha, sida qashinka ka soo baxa jardiinooyinka iyo jardiinooyinka, qalabka guryaha ee aan waxtar lahayn, iwm.
Qashinka bannaan: dayax gacmeedyada iyo astaamaha kale ee bini-aadamka asalkoodu yahay oo, intii ay ku sugnaayeen meeraha Dunida, ay horeba uga daasheen noloshooda waxtarka leh.
Cawaaqibta wasakhda carrada
La wasakhda carrada waxay u taagan tahay cawaaqib xumo iyo saameyn waxyeelo leh labadaba ninka, iyo sidoo kale dhirta iyo xayawaanka guud ahaan. Noocyada kaladuwan ee saameynaha sunta ah waxay aad ugu tiirsan yihiin walax kasta oo gaar ah oo caafimaadka carrada lagu liiday.
Midka koowaad natiijada Wasakhdaani waxay saameysaa dhirta, dhirta waa la xaalufiyey noocyada kala duwanna si aad ah ayaa loo yareeyey, kuwa weli sii jiraana waxay soo bandhigayaan dhinacyo daciif ah oo geedi socodkooda dabiiciga ah wey adkaan doonaan.
Wasakhaynta carrada ayaa hortaagan horumarka nolosha faunaCunto la'aan ama biyo nadiif ah, noocyadu waxay u haajiraan ama ay soo gaadhaan waxyeelo aan laga soo kaban karin silsiladdooda taranka. Nidaamkan markaa waxa loo yaqaan "xaalufinta dhulka" oo markaa "luminta qiimaha dhulka”, Howlihii beeraha waa istaageen, duunyadii way baaba’day dhulkuna waxtar ma leh.
Luminta tayada dhulka waxay ku lug leedahay taxane cawaaqib xumo u dhaxeysa iyada qiimo dhaca, sidaan hadda soo sheegnay, xitaa suurtagal la'aanta isticmaalka si loo dhiso, loo beero ama, si fudud oo fudud, loogu xareeyo nidaam deegaan caafimaad leh.
Cawaaqibta waxaa loo dhiibi karaa aamusnaan, taasoo sababi a dhibbanayaasha joogtada ah, ama dad ama duunyo iyo noocyada dhirta.
Tusaale cad wuxuu ahaa warshaddii tamarta nukliyeerka ee Chernobyl, ama tii ugu dambeysay Dareen shucaac ka soo baxa dhirta Japan de Fukushima, tan iyo markii wasakhda carrada ay saameyn ku yeelatay beeraha, xoolaha iyo kalluumeysiga. Xitaa waa la helay qashinka shucaaca ee xeebta laga soo bilaabo Fukushima, gaar ahaan dhulka carrada ee ka soo jeeda isla daadadkaas, sida lagu sheegay daraasado kala duwan oo ay sameeyeen Machadka Sayniska Warshadaha ee Jaamacadda Tokyo, Jaamacadda Kanazawa iyo Machadka Cilmi-baarista Qaranka.
Dhinaca kale, oo ay weheliso xaalad macquul ah oo ka sii daraysa muuqaalka dhulka oo ay ugu wacan tahay saboolnimada deegaanka, badiyaa khasaaro aan laga soo kaban karin, wasakhda carrada ayaa tilmaamaysa Milyaneerada khasaaray iyadoo laga hortagayo ka faa’iideysiga deegaankan dabiiciga ah ee dadka asaliga ah ama maalgashadayaasha warshadaha.
Chernobyl 30 sano kadib
30 sano gudahood tan iyo markii uu dhacay shilkii Nukliyeerka ee Chernobyl, shuuciyadii ayaa dhacday, Midowgii Soofiyeeti wuu kala furmay, waxaana jiray xitaa laba kacaan iyo wali dagaal qarsoon oo aan wali dhamaan oo ka socda Ukraine.
Marka la eego waqtiga taariikhi ah, waxay umuuqataa in adduunyadu ay u leexatay sidii loo baahnaa tan iyo subaxaas naxdinta leh, oo koox farsamoyaqaanno ah ku qarxiyeen fal-celiyaha nambar afar ee warshadda korantada. Vladimir Lenin, inkasta oo ay sameeyeen tijaabo la rabay in lagu adkeeyo ammaankooda.
Laakiin deegaanka - hawada, biyaha, dhulka oo lagu daray wax kasta oo ku noolaan doona kuna dhex noolaan doona - waxaad moodaa in gacmaha saacadu aysan si dhab ah u dhaqaaqin. Ku Wasakhda carrada ee shucaaca waxay kumanaan sano ku qaadataa inay sii xumaato. Marka soddon sano waxba maaha marka laga hadlayo masiibada nukliyeerka adduunka ugu xun.
Chernobyl wali waxay kujirtaa miraha kaymaha iyo boqoshaada, caanaha iyo wax soo saarka caanaha, hilibka iyo kaluunka, qamadiga. Iyo qoryaha gudihiisa lagu gubo iyo dambaska hadhaaga dambe. Si kale haddii loo dhigo, caafimaadka dadka oo dhan. Waxyaabaha masuulka ka ah - xitaa maanta - waxay noqon lahaayeen in suuqa lala aado a Miiska Geiger, Mashiinnadaas yar yar ee sameeya dhawaq waali ah markay u soo dhowaadaan shucaac, si loo ogaado haddii alaabada aad miiskaaga u qaadaneyso ay leeyihiin heerka amniga ee loo baahan yahay. lagu liqi doono.
Xalka wasakhda carrada
Ka hortagga ayaa ah xalka ugu fiican oo dhan, bar kan ugu yar inuu wax ku darsado. Laga soo bilaabo qashin ku tuurista meeshooda ilaa ka qayb qaadashada wada nadaafada bulshada dhexdeeda.
Laakiin sidoo kale waa run oo marwalba (oo aadan rabin inaad) iska ilaaliso wasakheynta carrada. Mararka qaar shilalka ayaa dhaca, taasoo adkeyneysa in la xakameeyo, markii aysan macquul ahayn.
Haddii aan si toos ah ugu tagno xididdada dhibaatada, a isbeddel xoog leh oo ku yimid qaabka wax soo saarka ama mamnuucida dhaqamada qaarkood sida waxqabadka warshadaha qaarkood oo soo saara qashinka sunta ah, soo saarista macdanta, isticmaalka Bacriminta macmalka ah ee ku saleysan saliida.
Nasiib darrose, xulashooyinkani wax kale ma aha oo waa riyood. Sidaa darteed, marka la eego fait accompli, xalal ayaa la raadinayaa oo u dhexeeya nadiifinta aagga illaa xadaynta fudud ee aagga waxyeelladu gaadhay iyo mamnuucida isticmaalkeeda waxqabadyada qaarkood. Xaaladaha daran, sida Fukushima ama Chernobyl, meelaha ay dhibaatadu saameysey kuma haboona nolosha aadanaha.
Iyo, maadaama wasakhaysigu uu kordhay tobanaankii sano ee ugu dambeeyay iyada oo ay sabab u tahay warshadaynta iyo horumarinta magaalooyinka, xalalku waxay si sax ah uga yimaadaan gacan ku haynta ilahaas. Caadi ahaan, ficilada ayaa diiradda lagu saaray hagaajinta dhirta dib-u-warshadaynta si loo yareeyo wasakhda carrada iyo, isla mar ahaantaana, biyaha, maadaama ay ku dhammaato wasakheynta.
Biyo-dhex-dhexaadinta carrada waa istiraatiijiyad lagu doonayo in lagu soo celiyo nidaamyada deegaanka ee wasakhaysan iyadoo la adeegsanayo noolaha, sida bakteeriyada, dhirta, fungi ... Waxay kuxirantahay nooca faddaraynta aad rabto inaad la dagaallanto, mid ama wakiil kale ayaa loo isticmaali doonaa bioremediator. Codsigeedu waa mid ballaaran, oo leh natiijooyin xiiso leh carrada ay ku sumoobeen shucaaca ama, tusaale ahaan, howlaha macdanta.
Sida dhaqamada wanaagsan, dib u warshadaynta ku filan ee qashinka iyo daaweynta qashinka, ah hirgelinta tamarta la cusboonaysiin karo, daaweynta qashinka warshadaha iyo guryaha ama horumarinta beeraha bey'ada waxay gacan ka geysaneysaa in carradu ka fogaato wasakheynta. Joogtee shabakadaha bullaacadaha oo xaalad wanaagsan ku jira isla markaana hagaajiya daaweynta biyaha wasakhda ah, iyo sidoo kale daaweynta dheecaannada warshadaha ee lagu celiyo dabeecadda.
Xalalka kale ee suurtogalka ah ee la tixgelin karo waxay noqon doonaan:
Hayso shabakad gaadiid dadweyne oo wanaagsan
Dadku waxay u isticmaalaan gawaarida raaxada oo keliya, laakiin sidoo kale sababta oo ah sida ay u adag tahay inay ku dhex wareegaan gaadiidka dadweynaha ee magaalooyin badan. Haddii dawladuhu maal galiyaan gaadiidka dadweynaha ee ugu waxtarka badan, dadku way ka cagajiidayaan adeegsiga
Adeegsiga gawaarida korontada ku shaqeysa
Gawaarida korontada ayaa marba marka ka dambeysa ku soo badanaya magaalooyinka, maxaa yeelay waxaa si gaar ah ugu shaqeeya koronto, ma sii daayaan nooc kasta oo wasaq ah oo ay hawada u sii daayaan. Halka madaxbannaanida ayaa dhibaato ahaan jirtayMaanta, baytariyada baabuurta korontada ku shaqeeya waxay sii soconayaan waqti dheer, waana suurtagal in laga helo saldhigyo lacag-bixin ah qaybaha kala duwan ee magaalooyinka.
Ka fogow in gaarigaagu uu muddo dheer socdo marka aad istaagayso
Qiyaas aad qaadi karto hada. Iska ilaali inaad istaagtid gaarigaaga oo socda, maxaa yeelay daqiiqadahaas gaarigu wuxuu isticmaalaa qadar wanaagsan oo shidaal ah, oo leh qiiqa ka soo baxa
Gaarigaaga ku hay xaalad wanaagsan
Baabuur cilladaysan ayaa u janjeera wasakh badan. Haddii aad fuliso dayactirka u dhigma ee gaarigaaga, waxaad hubineysaa oo keliya inaad ka fogaato dhibaatooyinka hawlgalka, laakiin sidoo kale waxaad yareysaa qiiqa gaaska.
Ka caawi ka hortagga xaalufinta dhirta
Si looga fogaado wasakhda carrada, tallaabooyinka xaalufinta dhirta waa in lagu fuliyaa si dhakhso leh. Dhir geedo. Nabaad guurka carrada waxaa sababa marka aysan jirin geedo ka hortaga lakabka sare ee carrada in ay qaadaan wakiilo kaladuwan oo dabiici ah, sida biyaha iyo hawada
Ka dooro waxyaabo badan oo ah alaabada dabiiciga ah.
Su’aal kama taagna in badeecooyinka dabiiciga ay qaali yihiin marka la barbar dhigo kiimikada. Laakiin xulashada alaabada dabiiciga ah ayaa dhiiri galin doonta a wax soo saar badan oo dabiici ah. Tani waxay kaa caawin doontaa ka hortagga faddaraynta carrada.
Adeegso bacaha dharka. Ka fogow cunidda bacaha bacdamaa ay waqti dheer ku qaadanayaan kala-baxa. Nasiib wanaag maadaama ay tahay inay bixiyaan isticmaalkooda si aad ah ayuu hoos ugu dhacay.
Kala soocida qashinka
Waa inaan u kala saarno qashinka hadba sida ay u kooban tahay:
Qashinka dabiiciga ah: dhammaan qashinka asalka noolaha, oo mar noolaa ama qeyb ka ahaa noole, tusaale ahaan: caleemaha, laamaha, buunshaha iyo haraaga soo saarista cuntada guriga, iwm.
Hadhaaga Noolaha: qashin kasta oo asal ahaan aan bayooloji ahayn, asal ahaan warshadeed ama hanaan kale oo aan dabiici ahayn, tusaale ahaan: caag, marooyin isku darma, iwm.
Haraaga qatarta ah: qashin kasta, ama asal ahaan ha ahaado ama ha ahaado, ee ka dhalan kara khatar sidaa darteedna waa in loola dhaqmaa si qaas ah, tusaale ahaan: qalabka caafimaadka ee faafa, qashinka shucaaca, aashitada iyo kiimikooyinka wax dila, iwm.
Wadada buuxda ee maqaalka: Cusbooneysiinta Cagaaran » Ecology » Beeraha deegaanka » Sababaha iyo cawaaqibta wasakhda carrada
Aad u xiiso badan, waxbarasho, waxay ila tahay aniga shaqadan, waa inaan ogeysiinno xarumaha waxbarashada, maxaa yeelay taasi waa meesha ay tahay inaan ku adkeysano silsiladda sababaha iyo saameynta! Waad mahadsan tihiin, waxay aad iigu fududdahay inaan helo qof aniga taageera
shaqo joogto ah si kor loogu qaado wacyiga.
Jawaab Dalila Rolón del Puerto
Waad soo dhoweyneysaa, Dalila!
sida waalan crazy
Waxaan arki doonnaa saameynta ay leedahay warshad tamarta nukliyeerka Fukushima mustaqbalka, runtiina waxay noqon doontaa mid culus. Dhammaan wixii aan raacin talooyinka amniga. Kiis kale oo muhiim ah ayaa ah faddarada nolosha badda ee saliida daadata. Maqaalka wanaagsan, lagama maarmaanka u ah wacyi gelinta dadka.
Mar labaad mahadsanid! : =)
Koon yar oo badan dijo
Faahfaahintaadu waa mid aad u xiiso badan
Jawaab ku hel inyar oo yar
Mahadsanid! Salaan weyn!
Waxaan siinayaa 1000
Mahadsanid, waad igu caawisay shaqadayda guriga.
Ma aanan jeclayn
aad ayey ufiican tahay warbixintan sii wad si aad u aragto hadii aan dhamaanteen ka wada ogaan karno dhibaatada aan geysaneyno
sababaha warbixintu waxay ahaayeen:
walxaha sunta ah ee ka hooseeya dhulka
daadin ama shil shil ah
Ku jawaab rosysela saldaña villacorta
Waad salaaman tihiin. sharaxaad aad u wanaagsan ...
Ku jawaab rgqreg
sababaha keena qufaca xoolaha
Ku jawaab micha2012m
Wheel cagaaran dijo
Waa wax aad u xiiso badan oo ay ku barayaan maqaalkan weyn, dib u warshadayntu waxay badbaadin kartaa buuraheena, magaalooyinkeena, webiyada iyo badaha.
Waa inaan ku beeranaa deegaankeena qiimaha dib u warshadaynta.
Ku jawaab Gawaarida Cagaaran